Cristiano Ronaldo oo u soo laabtay Real Madrid? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Cristiano Ronaldo oo u soo laabtay Real Madrid?
(11-9-2017) Weeraryaahnka dalka Portugal iyo Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa waxaa soo dhaweynaya Cayaartoyda Kooxdiisa kadib 4 Kulan oo uu Ganaax kaga maqnaa Garoomada.
Cayaartoyda kala ah Marcos Llorente iyo Lucas Vazquez ayaa barahooda bulshada ku soo daabacay soo dhawoow Cristiano Waana ku faraxsanahay in aad soo gasho Garoomada adiga oo u Cayaaraya kooxdaada.
RonaCristianoldo ayaa kulankiisii koowaad Xili Cayaareedkaan u dheeli doonaan Real Madrid Gaar ahaan Cayaarta ay la dheeli doonaan APOEL Nicosia oo ay Arbacada isku haleeli doonaan koobka UEFA Champions League.oo dib u bilaaban doona iyada oo ay difaacaneyso kooxda uu u dheelo Ronaldo ee Real Madrid.
Xiriirka kubada cagta dalka Spain ayaa RonaCristianoldo Garoomada ka Ganaaxay shan Cayaarood oo uu qaatay 4 ka mid ah oo uu ka maqnaa kooxdiisa isaga oo dheeli doona Cayaarta Arbacada ee koobka RonaCristianoldo hal kulan ayaana uga dhiman Ganaaxii horay loo saaray ee gudaha dalka Spain.
Ronaldo ayaa ka Caawin doona kooxdiisa dhibaatada Weerar la aan ee haysata kadib markii uu dhaawac soo gaaray Xiddiga dalka France ee Karim Benzemakaas oo laga saaray kulankii ay bareejada 1-1 ah lagaleen Naadiga Lefante sidoo kale Bale ayaa ah mid aan laysku halayn karayn.